Degso IrfanView loogu talagalay Windows
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (3.10 MB)
IrfanView waa muuqaal daawade bilaash ah, aad u dhakhso badan oo yar oo sameyn kara waxyaabo waaweyn. Waxaa jira in ka badan oo ku filan sawir-qaadaha barnaamijkan, kaas oo isku dayaya inuu noqdo mid fudud oo waxtar leh sida loogu baahan yahay si looga codsado bilowga iyo xirfadleyda isla waqtigaas. IrfanView waa softiweer hal abuurnimo badan leh oo leh astaamo xiiso leh, halkii laga xadi lahaa fikradaha iyo astaamaha daawadayaasha garaafyada kale ee horumarsan. Waxaan dhihi karnaa IrfanView, oo ay doorbideen labada shabakadood ee abuura iyo kuwa guryaha ku isticmaala adduunka oo dhan, waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu waaweyn ee ay tahay inuu ku jiro kombiyuutarkaaga.
In kasta oo IrfanView uu yahay qofkii ugu horreeyay ee sawir qaade Windows ah ee taageera GIF-yada adduunka ee badan (animated) GIFs, haddana waxay caddaynaysaa inay had iyo jeer tahay barnaamijka ugu horreeya iyo hal-abuurnimada. Sidoo kale, barnaamijka, oo ka mid ah daawadayaasha sawir ee ugu horreeya adduunka oo taageera TIFs badan iyo ICO badan, ayaa kuu fududeynaya xitaa shaqooyinka ugu adag ee leh astaamo badan oo horumarsan.
Isku xirnaanta cajiibka ah ee barnaamijka runtii waa u fududahay dadka isticmaala cusub. Dareen ahaan, waxaad ka heli kartaa badhannada aad rabto meel kasta oo aad raadineyso. Taageerada Thumbnails, waxaad u arki kartaa fayl sida thumbnails. Mid ka mid ah astaamaha xiisaha leh waa ikhtiyaarka Reopen, oo kuu oggolaanaya inaad furto sawirrada aad isbeddellada ku sameysay ee aad dib uga soo celisay diskiga, haddii aadan kaydsan.
Softiweerku wuxuu la yimaadaa noocii ugu dambeeyay ee IrfanView 4, oo leh laba qalab Google oo lagu rakibay inta lagu jiro rakibidda. Hadaad rabto waad ka boodi kartaa rakibaadan. Barnaamijku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad furto sawirrada oo aad wax ka beddesho. Waad jarjari kartaa oo ku goyn kartaa sawirro barnaamijka ku taageeraya qaabkan qaabab badan oo warbaahin ah. Waad ku dari kartaa isbeddelka dufcadda, ku dar, fiiq ama saamaynta cillad, abuur panoramas, oo si fudud ula dhaqmi kara midabada hababka.
Barnaamijka sidoo kale waxaa ku jira taageerada fiilada ee loogu talagalay sawirro badan, fiidiyow iyo qaabab maqal ah. IrfanView 4, oo ah mid aad u xiiso badan oo leh taageerida noocyada warbaahinta cusub sida MP3, AVI, Audio CD iyo WMA, wali waxay ilaalinaysaa fudeydkeeda iyo fudeydkeeda is dhexgalka. Jidka loo soo gaabiyo ee IrfanView ayaa meeshiisii ​​ka galay qaabkan cusub ee ah si aad sawirrada ugala soo baxdo miiskaaga darbijiraha. Hadda waxaad si dhakhso leh ugu daalaysan kartaa sawir qaadayaasha markabkan.
Noocyada faylka ee ay taageerayaan IrfanView: JPG, GIF, BMP, TIF, PNG, LWF, PCX, TGA, PCD, RAS, RLE, DIB, ICO, CUR, ANI, WMF, EMF, PPM, PGM, PBM, IFF, PSD, CPT, CLP, EPS, CAM, G3, WAV, MID, RMI, AIF, MP3, WMA.
Muhiim! Waad soo dejisan kartaa feylka dejinta xirmada ee loo baahan yahay in lagu isticmaalo barnaamijka Turkiga adigoo gujinaya halkan.
Barnaamijkan waxaa lagu soo daray liiska barnaamijyada Windows ee bilaashka ah.
Cabirka Faylka: 3.10 MB
Horumar: Irfan Skiljan
Wararkii Ugu Dambeeyay: 12-07-2021